कार्तिकपछि सिंहदरबार र पाँचथरमा वितरण हुने : राष्ट्रिय परिचयपत्र - समृद्ध नेपाल
कार्तिकपछि सिंहदरबार र पाँचथरमा वितरण हुने : राष्ट्रिय परिचयपत्र
राष्ट्रिय परिचयत्रमा के–के हुन्छ ?
परिचयपत्रको फाइदा : अपराध नियन्त्रणमा बढी उपयोगी
यसवर्ष राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि काम गरिने यी हुन् १५ जिल्ला
सरकारले यो बर्ष १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि काम गर्दैछ । यसका लागि ७ प्रदेशबाट दुई÷दुई वटा जिल्लाका दरले छानिएको छ । १ नंबर प्रदेशबाट झापा र शंखुवासभा, दुई नम्बरबाट महोत्तरी र सप्तरी, ३ नम्बरबाट ललितपुर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशबाट तनहुँ र स्याङ्जा, ५ नम्बरबाट गुल्मी र कपिलबस्तु, कर्णाली प्रदेशबाट सल्यान र जुम्ला, यस्तै प्रदेश ७ बाट कञ्चनपुर र अछाममा सुरु गरिदैछ ।
शंखुवासभामा १९ जना प्राविधिक जनशक्ति भर्ना गरिएको छ । उनीहरुलाई ४ टोलीमा विभाजन गरेर वडा वडामा पठाइएको छ । १ टोलीमा १ जना रुजु गर्ने अधिकारी पनि परिचलन गरिएको छ । रुजु गर्ने अधिकारीका रुपमा शिक्षा क्षेत्रका स्रोत व्यक्तिलाई परिचालन गरेको उनले बताए । बायोमेट्रिक विवरण लिनुपर्ने भएकोले एउटै व्यक्तिको विवरण लिन पनि आधा घण्टा लाग्ने गर्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा व्यक्तिगत विवरण तथा १० औलाको छाप लिन धेरै समय लाग्ने गरेको निर्देशक जोशीले जानकारी दिए ।
दोश्रो चरणमा अनलाइनबाट विवरण संकलन गर्ने तयारी भएको पनि उनले बताए । ब्यक्तिले सबै विवरण अनलाइनबाट भर्ने र पछि बायोमेट्रिकका लागि मात्र बोलाउने योजना छ । अहिले २ पानाको व्यक्तिगत विवरण भराउँदै बायोमेट्रिक विवरण लिने काम भइरहेको छ ।
यो एसियाली विकास बैंकको ८० करोड सहयोगमा सञ्चालनमा आएको आयोजना हो । फ्रान्सको कम्पनी आइडिमीयासँग मात्र ४९ करोडको सम्झौता भएको छ । आइडिमीयाको काम प्रणाली स्थापना गर्ने, प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रिन्टिङ मेसिन राखिदिने, विवरण संकलनका मेसिनहरु पाँचथर लैजानेसम्मको काम रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगको आंकडा काम लागेन
शूरुमा निर्वाचन आयोगले लिएको आंकडा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो । तर त्यो आंकडा काम नलागेको उनले बताए । बायोमेट्रिक पनि काम नलाग्ने भएकोले फेरी संकलन गरिएको उनले बताए । निर्देशक जोशीले भने–‘शुरुमा ठेक्का दिँदा निर्वाचन आयोगको आंकडा पनि लिने भनिएको हो, तर त्यो काम लागेन । त्यसमा औँठाछाप दुईटामात्र छ । फोटो पनि वेबक्यामबाट लिइएको छ । हाम्रो चाहीँ ठूलो क्यामेराबाट लिइएको छ । सबै त्यसको आधारमा नभएपनि हामीले त्यसलाई सन्र्दभसामग्रीका रुपमा लिएका छौँ ।’
राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि २०६७ साल साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको थियो तर विभिन्न विवादका कारण ढिलो गरि मात्र काम शुरु भएको थियो ।
बहिनी तिम्रो आत्मालाई सान्ति मिलोस ! रिप
चर्चित र्यापेर भिटेन दुवारा १५ थान फुटबल सहयोग !
सुँगुर पनि भिडियो गेम खेल्न सक्षम !
बर्षा राउत भारतले मिचेको भुमी नेपालले मेरै हो भन्न मिल्दैन !
उखु किसानलाई सरकारले भन्यो घर फर्कनुस् !
‘जीवनले मसँग दोस्रो पटक खेल खेल्यो’ : नायिका श्वेता खड्का
उदयपुरमा १३ जुवाडे पक्राउ !
अन्जु पन्त फाउन्डेसनले एकीकृत बस्ती बनाउने
खुसीको खबर स्याङ्जाको सुन्तला चीन निर्यात गर्न छलफल !
महाशिवरात्रिमा नागा बाबालाई निर्वस्त्र रहने अनुमति दिइयो तर मान्नुपर्नेछ यस्ता सर्तहरू !
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स लिन टोकन प्रणाली सुरु !
१८ नम्बर बाहिनीले उदयपुरको भुल्केमा सेनाद्धारा फायरिङ !